ယခုနှစ်သင်္ကြန် မြို့မတူရိယာအသင်း အနေဖြင့် မြို့မငြိမ်း၏ တေးသီချင်း၊ စာသားနှင့် သံစဉ်များအ?? - Yangon Media Group
ယခုနှစ်သင်္ကြန် မြို့မတူရိယာအသင်း အနေဖြင့် မြို့မငြိမ်း၏ တေးသီချင်း၊ စာသားနှင့် သံစဉ်များအ??
မြို့မတူရိယာအ သင်း လက်ရှိအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့အနေဖြင့် ယခုနှစ်သင်္ကြန်ကာ လသာမက မည်သည့်အချိန်တွင်မ ဆို မြို့မငြိမ်း၏တေးသီချင်း၊ စာ သားနှင့်သံစဉ်များကိုအသုံးပြု လျှင် မြို့မငြိမ်းမိသားစုက ဥပဒေကြောင်း အရ တရားစွဲဆိုသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။ ”ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ သတင်း စာတွေမှာ ကြေညာထားပြီးသားပါ။ သင်္ကြန်ကာလမှမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်အ ချိန်မှာပဲအသုံးပြုပြု တရားစွဲသွား မယ်။ မြို့မငြိမ်းနဲ့ သင်္ကြန်ဆိုတာ တစ်သားတည်းဖြစ်နေတဲ့အပေါ် မှာ အခုလက်ရှိ နာယကအဖွဲ့နဲ့ အ လုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကို အသုံးမပြု ဖို့တားမြစ်ထားတယ်။ အသုံးပြုရင် တရားစွဲဆိုသွားမယ်။ မြို့မငြိမ်းရဲ့ မိသားစုအားလုံးကလည်း ဒီသဘော အတိုင်းပဲ”ဟု ဆရာမြို့မငြိမ်း၏သားဖြစ်သူ ဒေါက်တာညွန့်လွင်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုလက်ရှိ မြို့မတူရိယာအ သင်း အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကို လည်း ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ပိုင်းက ဆရာမြို့မငြိမ်း၏ တေးသီ ချင်း၊ စာသားနှင့်သံစဉ်များကို အ သုံးပြုခဲ့သည့်အတွက် တရားစွဲဆို ထားသည်။ ”ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မြို့မအ သင်းမှာ အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ခု နစ်နှစ်တာကာလ တာဝန်ယူလုပ် ဆောင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းက မြို့မ အသင်းက အလွန်အားကောင်းခဲ့ တယ်။ လက်ရှိ အလုပ်အမှုဆောင် ဆိုတဲ့သူတွေရှိနေတဲ့ ကာလပတ်လုံး မြို့မငြိမ်းမိသားစုအနေနဲ့ မြို့မငြိမ်း ရဲ့ တေးသီချင်း၊ စာသားနဲ့ သံစဉ်ကို အသုံးပြုခွင့်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။ မြို့မ ငြိမ်းမိသားစုက လက်ခံနိုင်တဲ့ အလုပ်အမှုဆောင်သစ် ဖြစ်ပေါ်လာ တဲ့အချိန်ဆိုရင် ပြန်လည်အသုံးပြု ဖို့ခွင့်ပြုသွားမယ်”ဟု ၎င်းက ဆက် လက်ပြောကြားသည်။
ဆရာမြို့မငြိမ်း၏သားဖြစ်သူ ဦးရွှန်းမြိုင်အား မြို့မနှင့်ပတ်သက် သည့် ဂီတပညာရေးနှင့် ဖျော်ဖြေ ရေးဆိုင်ရာမြှင့်တင်မှုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဂီတမှူးတာဝန်ကို မြို့မ တူရိယာအသင်း အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့က ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ် ၂၄ ရက်တွင် တာဝန်မှရပ်စဲပြီးနောက် မြို့မငြိမ်းမိသားစုက ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၅ ရက်က မြို့မအ ပျော်တမ်းတူရိယာအသင်း၏ လက် ရှိ ဦးဆောင်နာယကများနှင့် အ လုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် တ ကွ အများသိစေရန်ကြေညာခြင်း ကို မန္တလေးနေ့စဉ်သတင်းစာတွင် လည်းကောင်း၊ စက်တင်ဘာ ၂ဝ ရက်တွင် မန္တလေးမြို့မိမြို့ဖများနှင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိ ပြည်သူချစ်သော မြို့မငြိမ်းချစ်သူများ၊ ဂီတချစ်သူများ သို့ မြို့မငြိမ်းမိသားစုပန်ကြားချက် ကို မြန်မာ့အလင်း၊ ကြေးမုံသတင်း စာကလည်းကောင်း ထုတ်ပြန်ကြေ ညာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာတော့ သီ ချင်းအသစ် ၁၂ ပုဒ်ကို ဖျော်ဖြေ သွားမယ်။ မြို့မငြိမ်းမိသားစုအနေ နဲ့က မြို့မတူရိယာအသင်းကို မူ ပိုင်ခွင့်နဲ့ အမွေဆက်ပိုင်ခွင့် အသိ အမှတ်ပြုဖို့ တရားရုံးမှာတောင်းဆို ထားတယ်”ဟု မြို့မအပျော်တမ်း တူရိယာအသင်းမှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ဝင်းက ပြောကြားသည်။ ဆရာမြို့မငြိမ်းအနေဖြင့် မန္တလေး မြို့၏ဂုဏ်ဆောင် မြို့မတူရိယာအ သင်းကြီးကို ၁၉၂၅ ခုနှစ်က စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဆရာမြို့မငြိမ်း မကွယ်လွန်မီအချိန်အထိ သင်္ကြန် သီချင်းများဖြစ်သည့် မန်းတောင် ရိပ်ခို၊ သင်္ကြန်မိုး၊ တူးပို့တူးပို့ စသည့် သင်္ကြန်တေးသီချင်းများအပါအဝင် တေးသီချင်း၊ စာသားစုစုပေါင်း ၁၆ဝ ကျော်ကို သီဆိုရေးစပ်ထား ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတသစ်အား ကြိုဆိုဂုဏ်ပြုသည့် အခမ်းအနား တာချီလိတ်မြို့၌ ကျင်းပ
လေပြင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် စိန်ဖူးတော်နှင့် ရွှေထီးတော် ပြုတ်ကျမြေခခဲ့ရသည့် နေရောင်ပြအင်း ??
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်၏ အနာဂတ် မဟာဗျူဟာ နိုင်ငံရေးပါတီ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့များနှင့် ဇူလိုင် ပထမ?